फागुनसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याइने ? – Sodh Khabar
फागुनसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याइने ?
काठमाडौं । नेपालले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्राप्त गरेको सात दिनभित्रै खोप कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ । खोप ल्याउन विभिन्न देशसँग प्रयास भईरहेको भन्दै प्राप्ती भएको सात दिनभित्र कार्यक्रम शुरु गरिने भएको हो । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर अहिले रहेका १६ हजार खोप केन्द्रलाई परिचालन गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले पनि खोप चाडै आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै निशुल्क रुपमा न्यायोचित तवरमा वितरण हुने दावी गरे । उनले कहिलेसम्म खोप आउछ भनेर यकिन साथ नभनेपनि फागुनमा आउन सक्ने भने संकेत गरेका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा खोप कहिले आउछ रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरो जिन्दगीमा फागुन महिना निकै चमत्कारी छ । यो फागुनमा पनि केही चमत्कारी हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
कपि राइट, उल्लंघनको आरोपमा बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालिकी अध्यक्ष लिना शर्मा पक्राउ
लगातार सुनको मूल्यमा वृद्धि